Akwụkwọ Ndịàmà Jehova Dosara Nakwa Ihe A Na-akwagharị Akwagharị
Tanzania: Ebe ndị na-agafe agafe kwụsịrị ka ha were akwụkwọ anyị e dosara n’ihe a na-akwagharị akwagharị na Dar es Salaam
Ọ BỤ eziokwu na ozi ọma ụlọ n’ụlọ ka bụ ụzọ bụ́ isi Ndịàmà Jehova si ezi ndị mmadụ ozi ọma Alaeze Chineke, ha na-ejikwa tebụl na ihe a na-akwagharị akwagharị mara mma eme otú ahụ. Nke a abaala ezigbo uru. (Mat. 24:14) Ha esila n’ụzọ ndị a mee ka ọtụtụ ndị nụ ozi ọma n’ebe na-ekwo ekwo. E bunyekwala ọgbakọ dị iche iche n’ụwa niile ihe a na-akwagharị akwagharị dị ihe dị ka narị puku abụọ na puku iri ise. Olee uru ha barala?
N’obodo a na-akpọ Dar es Salaam, nke dị́ na Tanzania, ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ narị mmadụ asaa ekwuola ka a bịa na-amụrụ ha Baịbụl kemgbe a malitere idosa akwụkwọ anyị n’ebe na-ekwo ekwo n’afọ 2014. Ọtụtụ ndị nwere mmasị amalitela ịbịa ọmụmụ ihe, ha na Chineke ana-adịkwu ná mma. Naanị n’otu afọ, ndị mmadụ weere akwụkwọ karịrị narị puku abụọ na puku iri ise n’ebe dị iche iche anyị na-edosa akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị ná mba ndị dị n’Afrịka nakwa ná mba ndị ọzọ.
N’Agwaetiti Sọlọmọn, e nwere ihe na-erughị puku ndị nkwusa abụọ na-ekwusa ozi ọma n’agwaetiti karịrị narị atọ ndị mmadụ bi. Iji ihe a na-akwagharị akwagharị e dosara akwụkwọ anyị ezi ozi ọma n’ebe na-ekwo ekwo aghọọla ụzọ magburu onwe ya ndị mmadụ si anụ ozi ọma n’agwaetiti a. Na Honiara, bụ́ isi obodo agwaetiti a, ụmụnna anyị nyefere magazin karịrị otu narị puku na puku anọ, nyefeekwa broshọ karịrị puku iri abụọ na atọ na narị isii. Ọtụtụ ndị e nyefere akwụkwọ ndị a si n’ime ime obodo nakwa n’agwaetiti ndị a na-enweghị Ndịàmà Jehova na ha. Naanị n’otu ehihie, ha nyefere akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? dị́ narị anọ, mmadụ iri isii kwukwara ka a bịa mụwara ha Baịbụl.
N’otu isi ụtụtụ, mgbe otu di na nwunye bụ́ ndị ọsụ ụzọ oge niile aha ha bụ Michael na Linda nọ na-edosa akwụkwọ anyị n’ụsọ mmiri dị́ n’Agwaetiti Margarita, dị́ na Venezuela, otu nwoke aha ya bụ Aníbal bịara ebe ahụ were akwụkwọ Bible Na-akụzi. Ọ gwara ha na nna ya nọ ebe ahụ nwụọ afọ asaa gara aga. Kemgbe ahụ kwa, nne ya dara mbà n’obi. N’izu na-eso ya, Aníbal laghachiri gwa Nwanna Michael na nwunye ya na ọ bụ ụbọchị ahụ ka nna ya nwụrụ afọ asaa gara aga. O wepụtara ekwentị ya kpọọ nne ya ma gwa Nwanna Michael ka ọ gwa nne ya okwu na-agba ume. Nwanna Michael mekwara otú ahụ. Kemgbe ahụ, nne ya akpọọla Nwanna Michael na nwunye ya n’ekwentị. Ha agụọkwarala ya ebe ndị gbara ya ume na Baịbụl. N’otu n’ime ozi nne Aníbal ziteere ha n’ekwentị, ọ gwara ha, sị, “Obi adịkwuola m mma taa n’ihi na unu akasiela m obi, meekwa ka okwukwe m sikwuo ike.”
N’Amerịka, e nwere ebe otu narị na iri abụọ na asaa ụmụnna anyị na-edosa akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị n’obodo iri na anọ. Malite n’ọnwa Septemba afọ 2014 ruo n’ọnwa Mach afọ 2015, a malitere ịmụrụ puku mmadụ asatọ, narị anọ na iri anọ na ise Baịbụl. Isi otú a ezi ozi ọma enyekwarala ọtụtụ ndị na-abịabu ọmụmụ ihe anyị aka ka ha maliteghachi ịbịa ọmụmụ ihe. Dị ka ihe atụ, na Lọs Anjelis dị́ na Kalịfọnịa, otu nwoke aha ya bụ Terry bịara ebe anyị dosara akwụkwọ. Di na nwunye bụ́ Ndịàmà Jehova dosara akwụkwọ ndị ahụ jụrụ ya ma ọ̀ gụtụla akwụkwọ anyị. Ọ gwara ha na ya bụ Onyeàmà Jehova, mana ya anaghịzi aga ọmụmụ ihe kemgbe ihe dị ka afọ anọ. Ha gụụrụ ya Ezikiel 34:11, ha na ya ekwurịta gbasara ya. Jehova kwuru n’ebe ahụ, sị: “Mụ onwe m ga-achọta atụrụ m wee lekọta ha.” Ha gwakwara ya gbasara Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova. N’ụtụtụ echi ya, Terry zigaara nwanna nwoke ahụ ozi iimel gwa ya na obere oge tupu ya ahụ tebụl ahụ ha dowere akwụkwọ, o kpere ekpere rịọ Chineke ka ọ gbaghara ya maka ịkwụsị ịga ọmụmụ ihe. Ọ rịọkwara ya ka o nyere ya aka ka ya na ya dịghachi ná mma. Terry kwuru na ọ bụ mgbe o kpechara ekpere ahụ ka ha ji ihu ọchị kelee ya, gụọrọ ya amaokwu Baịbụl ahụ gbara ya ume, gwakwa ya ihe ndị ọ ga-eme ka o nwee ike lọghachi ná nzukọ Jehova. Ọ sịrị na ọ bụ otú ahụ ka Jehova si za ya ekpere.
E nwere ebe anọ na-ekwo ekwo a na-edosa akwụkwọ anyị n’Adis Ababa dị n’Itiopia. N’ime ọnwa atọ, ụmụnna anyị nyefere akwụkwọ dị́ puku iri atọ na asaa, narị abụọ na iri asaa na ise. Narị mmadụ isii na iri abụọ na itoolu kwukwara ka anyị na-abịa amụrụ ha ihe. Otu agadi so ná ndị natara akwụkwọ Bible Na-akụzi. Ọ malitekwara ịgụ ya ozugbo. N’oge gara aga, ọ gara ụlọ akwụkwọ seminarị. O nwekwara ajụjụ ndị ọ chọrọ ịjụ gbasara Jizọs na Alaeze Chineke. N’echi ya, ọ gaghachiri n’ebe ahụ ụmụnna anyị na-edosa akwụkwọ ka ha zaa ya ajụjụ ndị ahụ. N’ụbọchị na-eso ya, o kwetara ka a mụwara ya Baịbụl, ná ngwụsị izu ahụ kwa, ọ gara ọmụmụ ihe mbụ ya. Ugbu a, ọ na-abịachi ọmụmụ ihe anya, na-emekwa nke ọma n’ọgbakọ.
Itiopia: Ihe a bụ ebe e dosara akwụkwọ anyị e dere n’asụsụ Amharik n’Adis Ababa
Na Meksiko, otu onye Juu bịara n’ebe ụmụnna anyị nwoke abụọ dosara akwụkwọ anyị ma jụọ ha ma hà nwere akwụkwọ kwuru gbasara ọnwụ. Ha gwara ya na akwụkwọ ha nwere kwuru gbasara ọnwụ agwụla. Ma, ha nyere ya nke kwuru gbasara ọdịnihu. Nwoke ahụ jidere otu n’ime ha aka, sị ya: “Achọghị m ihe ọ bụla gbasara ọdịnihu. M chọrọ igbu onwe m.” O bidoziri bewe ákwá. Ụmụnna anyị jụrụ ya ihe mere o ji chọọ igbu onwe ya, ya asị ha na nwa ya nwoke nwụrụ n’oge na-adịbeghị anya. N’ihi ya, ha gosiri ya ihe e kwuru n’isi nke asaa n’akwụkwọ Bible Na-akụzi. Ha gụụrụ ya paragraf abụọ mbụ dị n’okpuru isiokwu bụ́ “Mgbe Onye Ị Hụrụ n’Anya Nwụrụ,” gụọkwara ya ihe e dere ná ngwụcha isi nke asaa ahụ, bụ́ ebe e kwuru gbasara olileanya anyị nwere maka ndị nwụrụ anwụ. Ihe a ha gụụrụ ya metụrụ ya n’obi, ya ejide nwanna ahụ aka ọzọ jụọ ya ma ọ̀ ga-eme eme. Ụmụnna abụọ ahụ gwara ya na Jehova ga-emezurịrị nkwa ahụ. Nwoke ahụ jụrụ ha ihe ọ ga-eme ka ọ hụ nwa ya ọzọ. Ha gwara ya na ha ga-abịa n’ụlọ ya. Mgbe ha bịara, ha hụrụ na nwoke ahụ na-eche ha eche ka ha bịa mụwara ya Baịbụl.
Otu onye nlekọta sekit nke nyere aka hụ na a malitere idosa akwụkwọ anyị n’ebe na-ekwo ekwo na Niu Yọk kwuru, sị, “Jehova agọziela ihe a anyị na-eme. O meela ka anyị zie ọtụtụ puku mmadụ ozi ọma, meekwa ka anyị na-enyere ọtụtụ ndị na-anaghị abịakwa ọmụmụ ihe na ndị a chụrụ n’ọgbakọ aka ka ha lọghachiwa n’ọgbakọ n’ihi na ha yiri atụrụ furu efu.”—Ezikiel 34:15, 16.